Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.4 Research nzira
Akapiwa izvi gumi zvechadenga guru mashoko zvinyorwa uye tinoberekwa zvokukwegura kunyange zvakakwana vakachengeta data, kworudzii pakutsvakurudza nzira dzinokosha? Ndiko, tingadzidza sei kana tisingadi kubvunza mibvunzo uye usamhanya kuedza? Zvingaita sokuti kungoona vanhu vasingagoni kutungamirira nokutsvakurudza anonakidza, asi izvozvo handizvo.
Ndinoona nzira huru zvitatu kudzidza kubva observational date:, kuverengwa zvinhu kufungidzira zvinhu, uye approximating kuedza. Ndichaenda kutsanangura imwe neimwe nzira-izvo izvi zvaigona kunzi "tsvakurudzo nzira" kana "pakutsvakurudza Quick" -uye Ndichange kuenzanisira navo mienzaniso. Zvidobi izvi zviri kana kungoreva chete kana dzoga, asi vanoita akakunda yakawanda tsvakurudzo pamwe observational mashoko.
Vaifananidzira vaKristu kutaura kuti anotevera, tichiverenga zvinhu zvinonyanya kukosha kana tiri empirically adjudicating pakati kwevaongorori akasiyana pfungwa. Kufungidzira, uye kunyanya nowcasting, zvinogona kubatsira kuti vagadziri itsika. Pakupedzisira, hombe mashoko kunowedzera kukwanisa kwedu kuita causal nokufungidzira kubva observational mashoko.